Taariikhda Madaxwayne C/llaahi Yuusuf Axmed | Somali Wiki
Home / Siyaasiyiin / Taariikhda Madaxwayne C/llaahi Yuusuf Axmed
Posted by: Black in Siyaasiyiin 5 days ago	0 31 Views
C/llaahi Yuusuf Axmed waxa uu ku dhashay magaalada Gaalkacyo December Sanadkii 1934-kii.
Waxbarashadiisa dugsiga sare markuu dhamaystay, wuxuu galay kulliyadda culuumta ciidamada, muddo kaddib laba sano oo waxbarasho gaaban ah ayaa loogu diray talyaaniga sanadadii 1954-1956.
Sanadkii 1957-dii ayaa C/llaahi Yuusuf loo magacaabay ku-xigeenka taliyaha booliiska ee Gobolka Benaadir, isagoo jagadaas hayay muddo sanad ah. Waxqabad wayn oo uu muujiyay darted sanadki 1958-kii wuxuu noqday taliyaha qaybta booliiska ee gobollada Jubbada sare Iyo jubbada hoose.
Sanadki 1960-ki billowgiisi ayaa sanad waxbarasho millatari loogu diray talyaaniga. Markii uu talyaaniga kasoo laabtay ayuu mudane C/llaahi Yuusuf qabtay jagadii ugu horraysay ee Militariga isagoo noqday taliyaha policemilitary-ga ee qaybta 26-aad ee Fadhigeedu ahaa gobollada Woqooyiga soomaaliya.
Sanadkii 1964-tii ayaa loo dallacsiiyay C/llaahi Yuusuf darajada Gaashaanle dhexe “Lieutenant Colonel” waxaa uuna isla markaasi u soo gudbay maamulka dhexe ee wasaaradda Gaashaandhigga Soomaaliya.
Markale ayaa waxbarasho loogu diray dalka Ruushka (midawga soviet) Isagoo galay kulliyadda dagaalka ee militariga (Military war college) sanadkii 1965-1966.
Mudane C/llaahi Yuusuf Markii uu Ruushka kasoo noqdayna waxaa laga dhigay taliyaha hoggaanka tababarka ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed biishii May sanadkii 1968-dii.
Markale ayaa lagu celiyay gobollada woqooyiga Soomaaliya, sanadkii 1969-kii Isagoo halkaas looga dhigay abbaan-duulaha ciidankii loo yaqaannay “Ciiidanka Koobaad” ee fadhigoodu ahaa woqooyiga Soomaaliya.
Waxaa maalmihii curashada kacaanka sanadkii 1969kii loo taxaabay xabsiga, iyadoo lagu eedeeyey inuu ka caga jiidayey kanaackii uu hoggaaminayey Jeneraal Maxamed Siyaad Barre. waxa uuna xirnaa muddo lix sano ah, waxaana lasoo daayay Sanadkii 1975tii. Maxamed Siyaad Barre oo madaxa u salaaxaaya ayaa Waxa uu u magacaabay taliyaha hoggaanka gaadiidka iyo dayactirka ee xoogga Dalka, Waxa uuna jagadaas hayay inta u dhexeysay sanadadihii 1975-1977dii.
Dagaalkii xoraynta ee Soomaali Galbeed ayaa waxaa loo magacaabay C/llaahi Yuusuf inuu hoggaamiyo ciidamada Dagaalka, wuxuuna noqday taliyaha qaybtii ka dagaalamaysay koonfur Galbeed Soomaaliya, wuxuuna ciidamadii Itoobiyaanka Cabdulaahi kaga adkaaday dhankaas isagoo ka qabtay dhamaan aaggii isaga ku aaddanaa, ilaa uu gaaray magaala madaxda gobolka Nagaylle 1978dii.
Sannadkii 1978 waxaa dhacay inqilaabka ama afgambigi loo yaqaannay ‘Inqilaabkii (afgambigi) dhicisoobey’ C/llaahi Yuusuf na Waxa uu galay dalka Itoobiya.
Bishii September 1978dii ayuu C/llaahi Yuusuf aasaasay mucaaradkii ugu horeeyay ee Taariikhda dalka soomaaliya (SSF).
Sannadkii 1985 ayuu boqorki Itoobiya Mingiste Xayle Maryam xabsi ay leeyihiin ciidamadu oo kuyaal Itoobiya u taxaabay C/llaahi Yusuf. Lix-sano oo kale ayuuna ku xernaa, Wuxuuna xabsigii Itoobiya ka soo baxay 1991 kadib markii uu dhacay Maamulkii Mingiste, xilligaas oo dawladii Soomaaliyana ay dhacday.
Muddadaas C/llaahi Yuusuf Waxa uu tegey Gobollada Waqooyi Bari ee Soomaaliya, halkaas oo uu Madaxweyne ka noqday Dawlad Goboleedka Puntland oo la aasaasay bartamahii sannadkii 1998. Waxana uu halkaas madaxweyne ka ahaa ilaa uu ka aadey Eldoret/Nairobi Kenya oo lagu soo dhisayey Dowlad Kumeel Gaar ah.
Markey taariikhdu ahayd October 10, 2004 ayuu C/Laahi Yuusuf noqday Madaxweynaha DKMG ee Soomaaliya. Jagadaas oo uu Muddo badan ku taamayey inuu gaaro. Waxana uu dhawr jeer intii uu shirka Kenya socdey ku celceliyey in uu asagu bilaabay dhibka Soomaaliya uuna isagu dhamayn karo.
December 24, 2008 ayaa waxaa soo shaac baxay in C/laahi Yuusuf uu iska Casilayo madaxweynaha DKMG.
Isniin December 29, 2008 (oo ku beegnayd 1dii bisha Koowaad ee Muxarram Ee sannadki Hijriyada 1430) ayaa C/laahi Yuusuf iska casiley xilka Madaxweynaha DKMG, kaddib markii uu cadaadis kaga yimid beesha Caalamka, sida uu ka sheegay hadal uu kahor jeediyey baarlamaanka oo uu warqaddii is casilaadda kula wareejiyey guddoomiyihi baarlamaanka DKMG sida uu dhigayo dastuurku.
Madaxwayne Cabdullaahi Yuusuf Axmad waxa uu dhalay afar caruur ah (Laba wiil iyo Laba Gabdhood) waxa ayna ku noolyihiin dalka Canada.
C/laahi Yuusuf wuxuu qoray buug lagu magacaabo “HALGAN IYO HAGARDAAMO” kaasoo uu kaga hadlay taariikh nololeedkiisa siyaasada iyo tii miyigaba.
Madaxweynahii hore ee Dowladdii Kumeel Gaarka ahayd, Mudane Cabdullaahi Yuusuf Axmed ayaa waxa uu geriyooyaday, Maalin jimce ah March 23 2012, waxa uuna ku geeriyoodey magaalada Dubai ee dalka imaaraadka Carabta.
Previous: Taarikhda Saxaafadda Soomaaliyeed Iyo Heerarkii Ay Soo Martay
Next: Taariikh Nololeedkii Fannaanaddii Faaduma Qaasim Hilowle